Wararka - Suuqa Dahabka Dheeman, waa tartan u dhexeeya tikniyoolajiyadda iyo jacaylka
Dheeman si dabiici ah loo soo saaray ayaa soo muuqday bilowgii 1950-meeyadii. Si kastaba ha noqotee, illaa dhowaan, kharashyada wax soo saar ee ku-beerista dheeman waxay bilaabeen inay si aad ah uga hooseeyaan qiimaha dheemanta macdanta.
Horumarkii ugu dambeeyay ee sayniska iyo teknoolojiyadda ayaa si weyn u yareeyay kharashka wax soo saarka ee dheeman shaybaar soo saaray. Guud ahaan, qiimaha lagu beero dheeman ayaa 30% ilaa 40% ka hooseeya qiimaha macdanta dheeman. Tartankan, yaa noqon doona guuleystaha ugu dambeeya? Ma dheeman macdanta ayaa si dabiici ah u samaysan dhulka hoostiisa, mise waa beeritaanka dheeman ay farsamada abuurtay?
Shaybaarka beeraya dheeman iyo dheeman macdanta ayaa leh isla jirka, kiimikada, iyo qaybaha indhaha waxayna u egyihiin si isku mid ah dheeman macdanta. Heerkul aad u sarreeya iyo deegaanno cadaadis sarreeya leh, shaybaaradu waxay horumariyaan dheemman si ay ugu daydaan tillaabooyinka dheemanta macdanta, iyagoo ka koraya iniinyaha yar yar ee dheemanka ah ee isu beddelaya dheeman waaweyn. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in dheeman lagu sameeyo shaybaarka. In kasta oo waqtiga dheemanka macdanta uu u dhow yahay isku mid, haddana waqtiga ay qaadatay in la sameeyo dheeman dhulka hoostiisa ku jira wuxuu soo maray boqolaal milyan oo sano.
Beerista dheeman ayaa wali ku jirta bilowga suuqa ganacsiga dhagxaanta.
Sida lagu sheegay warbixinno ay soo saartay shirkadda Morgan Stanley Investment Company, iibka xaddhaafka ah ee dheeman shaybaadhku hormarsan yahay ayaa u dhexeeyey 75 milyan illaa 220 milyan oo doollarka Maraykanka ah, taas oo keliya 1% ka ah iibka adduunka ee dheeman dheeman. Si kastaba ha noqotee, marka la gaaro sanadka 2020, Morgan Stanley wuxuu filayaa in iibka dheeman ee sheybaarka la soo saaray uu ka koobnaan doono 15% suuqa dheeman yaryar (0.18 ama ka yar) iyo 7.5% dheeman waaweyn (0.18-karat iyo wixii ka sareeya).
Soo saarista dheeman la beeray ayaa sidoo kale aad u yar xilligan. Sida laga soo xigtay xogta Frost & Sullivan Consulting, soosaarka dheeman ee 2014 wuxuu ahaa kaliya 360,000 carat, halka soo saarista dheeman macdanta laga helay ay ahayd 126 milyan carat. Shirkadda la-talinta waxay rajeyneysaa in baahida macaamiisha ee qiimaha badan ee waxtarka leh ay kor u qaadi doonto wax soo saarka dheeman ee loo kiciyey 20 milyan sanadka 2018, sanadka 2026-na ay kordhin doonto 20 milyan oo karat ah.
CARAXY Diamond Technology waa hormuudka suuqa gudaha ee lagu beero dheeman sidoo kale waa xubinta ugu horeysa IGDA (Ururka Caalamiga ah ee Beerista Dheeman) ee ganacsi ka sameeya Shiinaha. Mr. Guo Sheng, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda, ayaa rajo wanaagsan ka qaba mustaqbalka horumarinta suuqa ee beerashada dheeman.
Tan iyo bilowgii ganacsiga sanadkii 2015, iibka dheeman ee CARAXY shaybaarka la soo saaray ayaa saddex jibaarmay iibka sanadlaha ah.
CARAXY wuxuu kobcin karaa dheeman cad, dheeman jaalle ah, dheeman buluug ah iyo dheeman casaan ah. Waqtigan xaadirka ah, CARAXY wuxuu isku dayayaa inuu kobciyo dheeman cagaaran iyo guduud ah. Inta badan dheemanka shaybaarka ku koray ee kuyaala suuqa shiinaha ayaa kayar 0.1 carat, laakiin shirkada CARAXY waxay iibisaa dheeman ay gaari karto 5 carat oo dheeman cad, jaalle, buluug iyo 2-karat ah.
Guo Sheng wuxuu aaminsan yahay in horumarka dhanka teknolojiyaddu uu jabin karo xadadka cabbirka dheeman iyo midabkiisa, isla markaana uu yareynayo kharashka ku baxa goynta dheemanka, si ay macaamiil badani ula kulmaan soo jiidashada dheeman.
Tartankii u dhexeeyay jaceylka iyo tikniyoolajiyadda ayaa noqday mid sii xoogeystay. Iibiyeyaasha dhagxaanta macmalka ah waxay sii wadaan inay uga cawdaan macaamiisha in dhiig-miirashada dheemanka ay waxyeello baaxad leh u geysteen deegaanka, iyo sidoo kale arrimaha anshaxa ee ku jira "dheeman dhiiga."
Diamond Foundry, oo ah shirkad bilaw u ah dheeman oo ku taal Maraykanka, ayaa sheeganaysa in wax soo saarkoodu yahay "sida la isku halleyn karo sida qiimahaaga oo kale." Leonardo DiCaprio (Little Plum), oo jilay filimkii Dhiiga dheemman ee 2006, wuxuu ka mid ahaa maalgashadayaasha shirkadda.
Sannadkii 2015-kii, toddobada shirkadood ee ugu waawayn shirkadaha macdanta dheemanka ayaa aasaasay DPA (Ururka Saarayaasha Dheemanka). Sanadkii 2016, waxay bilaabeen olole loogu magac daray “Real is rare. Dhif waa dheeman. ”
Shirkadda weyn ee macdanta laga qodo ee De Beers ayaa ah saddex meelood meel meel iibka adduunka, isla markaana shirkadda weyn ayaa rajo xumo ka qabta dheeman macmal ah. Jonathan Kendall, gudoomiyaha De Beers International Diamond Grading and Research Institute, wuxuu yidhi: “Waxaan ku samaynay cilmi baaris balaaran macaamiisha aduunka oo dhan mana arag in macaamiisha ay dalbadaan dheeman macmal ah. Waxay doonayeen dheeman dabiici ah. . ”
”Hadaan ku siiyo dheeman macmal ah oo aan ku idhaahdo waan ku jeclahay adiga kuuma taabanayo. Dheeman macmacaan ah waa mid raqiis ah, dhib leh, aan awoodin inuu soo gudbiyo wax shucuur ah, si fududna uma muujin karo inaan ku jeclahay. ” Kendall wuxuu ku daray Wadada.
Nicolas Bos, gudoomiyaha iyo agaasimaha guud ee dahablaha Faransiiska Van Cleef & Arpels, ayaa sheegay in soosaarka Van Cleef & Arpels uusan waligiis isticmaali doonin dheeman macmal ah. Nicolas Bos wuxuu sheegay in dhaqanka Van Cleef & Arpels ay tahay in la isticmaalo oo kaliya dhagaxyada macdanta dabiiciga ah, iyo in qiimaha “qaaliga ah” ee ay ku doodaan kooxaha macaamiisha ahi aanu ahayn waxa sheybaarku ku beero dheeman.
Bangi maalgashi oo aan la aqoon oo ka tirsan bangiga maalgashiga dibada una qaabilsan mideynta shirkadaha iyo wax soo iibsiga ayaa wareysi uu siiyay China Daily wuxuu ku sheegay in isbadalka joogtada ah ee fikradaha isticmaalka dadka iyo lumitaanka tartiib tartiib ah ee "dheeman dheereeya" soo jiidasho, dheeman si dabiici ah loo beeray. sii wad kor u kaca. Sababtoo ah dheeman si dabiici ah loo beeray iyo dheeman dabiici ah oo macdan leh ayaa si isku mid ah u muuqda muuqaal ahaan, macaamiisha waxaa soo jiitay qiimaha jaban ee dheeman la beeray.
Si kastaba ha noqotee, bangiga ayaa aaminsan in dhiig-miirashada dheemanku ay ku habboonaan karto maalgashi, maxaa yeelay hoos u dhaca dheemanta macdanta ayaa sababi doonta in qiimahoodu si joogto ah u koro Dheeman waaweyn oo carat ah iyo dheeman heerkiisu sareeyo oo heerkiisu sarreeyo ayaa noqonaya quluubta dadka taajiriinta ah oo leh qiime maalgashi oo weyn. Wuxuu aaminsan yahay in beerista shaybaarka ee dheeman ay kaabis ku tahay suuqa macaamiisha badan.
Cilmi baarista ayaa ku qiyaastay in soo saarista dheeman macdanta ay sare u kici doonto sanadka 2018 ama 2019, kadib marka wax soo saarku si tartiib tartiib ah u hoos u dhaco
Kendall wuxuu ku andacooday in dheemantii De Beers ay sidoo kale taageeri karto “dhowr iyo toban sano”, ayna aad u adag tahay in la helo macdan dheeman weyn oo cusub.
Guo Sheng wuxuu aaminsan yahay sababta oo ah dareenka dareenka macaamiisha, suuqa giraanta aroosku wuxuu caqabad ku yahay shaybaarrada si loo beero dheeman, laakiin maaddaama dharka maalinlaha ah ee dahabka iyo hadiyadaha dahabka ah, iibka dheeman shaybaar lagu soo saaray uu si dhakhso leh u koray.
Haddii dhagaxyada macmalka ah lagu iibiyo walxaha dabiiciga ah ee dhagxaanta dabiiciga ah, kuleylka suuqa ee sii kordhaya ee dhagaxyada macmalka ah ayaa sidoo kale khatar ku ah macaamiisha.
De Beers wuxuu lacag badan galiyay teknoolojiyada kormeerka dheeman. Qalabkeedii ugu dambeeyay ee baarista dheeman, AMS2, ayaa la heli doonaa bisha Juun. Kan ka horeeyey ee AMS2 wuu awoodi waayey inuu ogaado dheeman ka yar 0.01 carat, AMS2-na waxay suurta gelisay in la ogaado dheeman yar yar oo qiyaas ahaan ah qiyaastii 0.003 carat.
Si loo kala saaro dheeman macdanta, alaabada CARAXY dhammaantood waxay ku suntan yihiin sheybaar-koray. Kendall iyo Guo Sheng labaduba waxay aaminsan yihiin inay muhiim tahay in la ilaaliyo lana xoojiyo kalsoonida macaamiisha ee suuqa si ay iibsadayaasha dahabku u ogaadaan nooca dheeman ee ay ku iibsanayaan qiimo aad u badan.
Waqtiga dhejinta: Jul-02-2018